နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Hydroponics > NFT Hydroponic စနစ် > Ebb ပြီးတော့ Flow NFT Hydroponic စနစ်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောက်ပဲသီးနှံများအတွက် Ebb နှင့်စီးဆင်းသော NFT Hydroponic system: ခေတ်မီဖန်လုံအိမ်တွင်ပျိုးပင်များဖြန့်ဖြူးရန်အတွက် Ebb & tray ပလတ်စတစ်ခုံစားပွဲကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခန်းထဲရှိတစ်နေရာတည်းတွင်သာလိုအပ်ပြီး ebb & tray လှိမ့်ခုံတန်းလျားနေရာသည်နေရာမဖြုန်းတီးနိုင်သော roller စီးရီးကို အသုံးပြု၍ ဘယ်သို့မဟုတ်ညာသို့ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Hydroponics ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်စီးပွားရေးကျပြီးလက်တွေ့ကျသည် ။bb နှင့် NFT စီးဆင်းသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်အတွက် Hydroponic system ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့၊ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်သို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုသေချာစေသော 100% အပျိုစင်ကုန်ကြမ်းများကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သည်။
ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့် NFT hydroponic စနစ်စီးဆင်း
ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့် NFT hydroponic စနစ်စီးဆင်း flood tray Ebb and flow trays growing system hydroponics greenhouse planting table isaform of hydroponics that is known for its simplicity, reliability of operation and low initial investment cost. Pots are filled with an inert medium which does not function like soil or contribute nutrition to the plants but which anchors the roots and functions asatemporary reserve of water and solvent mineral nutrients. The hydroponic solution alternately floods the system and is allowed to ebb away.
ABS ဗန်း၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဘောင်၊
၃ ပေ (၀.၉၁ မီတာ) / ၄ ပေ (၁.၂၂) / ၅ ပေ (၁.၅၃ မီတာ) / ၅.၆ft (၁.၇ သန်း) / ၅.၈၃ft(1.78m)
၇၀ စင်တီမီတာခန့် (၈ မှ ၁၀ စင်တီမီတာကိုချိန်ညှိနိုင်သည်) ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
45 မှ 50 ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းမိုင်
ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့် NFT hydroponic စနစ်စီးဆင်း,ebb and flow trays growing system hydroponics greenhouse planting table is the industry standard for propagating seedlings, flow growing and farming inamodern greenhouse.
- တာရှည်ခံခြင်း၊ မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုရှိသည့် ABS ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသက်တမ်းကြာရှည်စေရန် UV ခုခံမှု
â€¢စနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောလက်လီ EBB-FLOW ခုံတန်းရှည်များမှရေကိုရေလောင်းနိုင်သည်
optimal အကောင်းဆုံးရေလီဗာကိုတိကျမှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွင်း၌ gradation
Rolling Bench ဖြင့် Ebb နှင့် Flow system တို့သည် support frame ၏အပေါ်ဆုံးစီးရီးများကို အသုံးပြု၍ ဘယ်သို့မဟုတ်ညာသို့ရွှေ့နိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစားပွဲများအကြားကွာဟချက်များမရှိဘဲဘေးချင်းယှဉ်။ ထားနိုင်ပြီးစိုက်ပျိုးသူက၎င်းတို့သည်စားပွဲတစ်ခုအကြားဆက်သွယ်မှုရရန်လိုအပ်မှသာ၎င်းတို့ကိုခွဲထုတ်နိုင်သည်။
ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော Seedbed Hydroponic လှိမ့်ခုံများ၊ အက်ဘ်နှင့်စီးဆင်းမှုဇယားစနစ်သည်ပျိုးပင်များဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်သည်။ စီးပွါးစီးဆင်းမှုနှင့်ခေတ်သစ်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိခြင်း။
ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့် NFT hydroponic စနစ်စီးဆင်း It's used for planting vegetables and flowers cultivation. Tray thickness is an important consideration. Our tray is 2.5 mm in thickness, Although thinner trays can save money, they will crack more easily. ABS plastic isabetter choice.
၁။ ရေဗန်း: U.A.resistant, ၁၀၀% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ABS ပလတ်စတစ်ပင်၏မူလ ABS ပလပ်စတစ်အဖုံး၊ ဒီအဗန်းများပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. Hand wheel: Manual drive၊ ထိပ် 60cm ကိုဘယ်ဘက်မှညာသို့ရွေ့ရန်ဆွဲဆောင်သည်။ ဖန်လုံအိမ်areaရိယာအသုံးချမှုသည် ၅၀% အထိရှိသည်။
၃။ လေးလံသောခြေတင်ခုံ: အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ဘ ၀ - ပူပြင်းသောအကာဖြင့်သုတ်ထားသောအပြီးသတ်။
၄။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအကန့်ဖြင့်ဘောင်ခတ်ထားပါ။ ဘောင်အတွက်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချပါ။ လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ရွှေ့ဖို့အလွယ်တကူ။
1. အခြားဆည်မြောင်းနည်းစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလုပ်သမား ၆၀ မှ ၉၀% ကိုကယ်တင်ပါ။
၂။ ရေ ၅၀-၉၀% ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်စေသောစနစ်ဖြင့်ရေလောင်းသောအခြားနည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
3. အပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်သောစနစ်ဖြင့်ရေလောင်း၏အခြားနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 75-90% ဓာတ်မြေသြဇာသိမ်းဆည်းပါ။
4. ကြီးထွားလာပတ်ဝန်းကျင်၌ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆကိုထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူ။ စက်ရုံအရွက်များနှင့်ခုံတန်းရှည်အောက်ရှိကြမ်းပြင်များသည်အမြဲတမ်းခြောက်သွေ့နေသည်။
၅။ သီးနှံများကိုအမြဲတမ်းအညီအမျှရေလောင်းကြသည်။ အနားစွန်းများစိုစွတ်စေသောစိုစွတ်မှုမရှိပါ။
6. Ebb & Flow ခုံတန်းရှည်များတွင်စိုက်ပျိုးသောကောက်ပဲသီးနှံများသည်အခြားဆည်မြောင်းစနစ်များထက် ၁ ပတ်မှ ၂ ပတ်အလိုတွင်အများအားဖြင့်ပြီးစီးကြသည်။
9.Ebb & Flow ခုံတန်းရှည်များသည်လက်လီရောင်းဝယ်မှုဒေသများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များသည်areaရိယာတွင်ရှိနေစဉ်၊ ရေပိုက်များမသုံးသည့်အပြင်ကြမ်းပြင်များမှာသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့နေလျှင်တောင်မှရေလောင်းနိုင်သည်။
၁၀။ Ebb & Flow ခုံတန်းရှည်များကိုဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့်မျိုးစေ့များစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်းခန်းများ၌စုပုံနိုင်သည်။ အထက်ရေများမှအောက်သို့ဆင်းသောရေမရှိပါ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက် Floating Panel ကို NFT Hydroponic စနစ်Jianda Greenhouse ကုမ္ပဏီမှလာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်စုံစမ်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။